Dowladda Soomaaliya oo digniin u jeedisay shirkad laga leeyahay Shiinaha oo howlo baaris ka wadda Soomaaliland - iftineducation.com
Dowladda Soomaaliya oo digniin u jeedisay shirkad laga leeyahay Shiinaha oo howlo baaris ka wadda Soomaaliland
aadan21 / January 8, 2015
iftineducation.com – Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay si dhaw ula socoto dhaq dhaqaaqa shirkadda ARC oo laga leeyahay dalka Shiinaha, taasoo waayahan si sharci daro ah macdan baaris iyo qodis uga wada Buuraha Simoodi ee Gobolka Awdal ee Maamulka Somaliland.
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaarada Macdanta iyo Batroolka ayaa lagu sheegay in howlaha shirkadan ARC ee sharci darada ay abuurtay xasilooni darro soo wajahday deegaanadaas, kadib markii ay qoratay boqolaal meleeshiyaad ah oo ilaalinaya shirkadda iyo shaqaalaheeda, islamarkasna ay bara kicisay dadkii iyo duunyadii deegaankaas ku noolaa.
“Dawladda Soomaaliya waxay walwal ka muujnaysaa, sida horeba u dhacday, in shirkadaha sharci darrada ahi ay qaarkood ku hawlyihihiin inay sun ku aasaan badda iyo barriga Soomaaliya. Si looga fogaado xasarado iyo colaado ka dhaca gobolkaas, wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxay ka dalbanaysa ARC inay si degdeg ah u joojiso macdan baarista sharci darrada ah ee ay wado taas oo dhalisay xasarad siyaasadeed & nabadgelyo oo ka aloosantay deegaankaas oo muddo dheer ahaa meel nabdoon”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka.
Sidoo kale waxaa loogu baaqay dowladda Shiinaya in shirkadaha dalkeeda laga leeyahay in aysan ka qeyb qaadan sii hurinta colaadaha sokeeye ee Soomaaliya, sida lagu yiri war saxaafadeedka.
“Waxaan uga digeynaa dhamaan shirkadaha caalamiga ah ee macdanta iyo shidaalka baara inay galaan heshiisyo sharci darro ah, oo heerkoodu ka hooseeyo habdhaqanka caalamiga oo ay isku dayayaan inay kula soo baxaan khayraadka Soomaaliya, kuna qaataan si rakhiis ah oo aan waafaqsanayn sharciyada dalka iyo xeerarka caalamiga ah ee khuseeya macdan iyo shidaalka. Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya masuul kama aha wixii dhibaato ama khasaare ah oo soo gaaro shirkadaha sida sharci darrada ah kusoo gala dalka”ayaa war saxaafadeedka ka soo baxay Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka lagu yiri.
Wasaaradda ayaa sidoo kale ka dalbatay shirkada ARC inay si degdeg ah u joojiso hawlaha sharci darrada ah ay wado, dalkana isaga baxdo.
“Sidoo kale wasaaradda Macdanta & Batroolka, waxay beeninaysaa, warbixinno been ah oo ay qoreen qaar ka mid ah Shabakadaha Soomaalida oo sheegay in Dawladda ka codsatay Shiinaha inay ka caawiso macdan iyo shidaal baaris”
Wasaaraddu waxay caddeynaysaa inaan warkaas waxba ka jirin. Waxa kaliya ee looga hadlay shirka dhex maray Wasaarada Arrimaha Dibadda & Wasaaradda Macdanta & Batroolka, JFS iyo Safaaradda Shiinaha waxay ahayd kaliya arrinta shirkadda ARC oo dhaqadhaqaaq sharci darro ah ka bilowday Soomaaliya gudaheeda, iyadoo ku xadgudubtay shuruucda caalamiga iyo madaxbanaanida waddanka, kuna tumatay midnimada dalka & go’aamada UN ta ee ku wajahan Soomaaliya.
Dowladda oo caawa ciidan soo dhoobtay wadooyinka ku teedsan Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho
Gabar soomaali ah oo ka sheekaysay sabata ku kaliftay la tumashada wiil Kirishtaan ah Daawo muuqaalka